Farmaajo ayaa ka quustay dalabka cusub ee dhexdhexaadinta ee uga yimid Koonfur Afrika - Axadle – Axadle
Kinshasa (Axadle) – Dhowr saacadood ka dib markii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo iyo Madaxweynaha Midowga Afrika ay ku casuumeen inuu dhexdhexaadiyo dhinacyada ay khusayso arrimaha siyaasadda, ayaa madaxweyne Farmaajo wuxuu soo saaray war murtiyeed durba niyad jab ku riday wadahadallada.
Dukumiintiyo hore oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo guddoomiyaha DRC labaduba waxay caddeeyeen in Farmaajo uu doonayo Madaxweyne Félix Tshisekedi inuu wadahadal la yeesho daneeyayaasha Soomaaliya oo ku saabsan heshiis aan la shaacin oo doorashada ku saabsan. Laakiin saacado ka dib, Farmaajo wuxuu soo saaray qoraal uu ku sheegayo inuu doonayo inuu bilaabo wadahadal ku saabsan in doorasho la qabto.
Hadalka Madaxweyne Farmaajo ayaa muujinaya inuu wali ku dhegan yahay doorashada hal qof iyo hal cod, taas oo horey loogu heshiiyey inaysan macquul aheyn Soomaaliya.
Qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo mucaaradka ayaa horay u sheegay in ku adkeysiga “qabashada” hal qof iyo cod ay tahay xeelad uu Farmaajo waqtiga ku lumiyo, maadaama uusan hal maalin ka shaqeyn afartii sano ee uu madaxweynaha ahaa.
Qabashada doorashada dadban ayaa sidoo kale marmarsiinyo u aheyd Maxamed Mursal muddo labo sano oo sharci daro ah oo uu ku kordhiyay waqtiga Farmaajo iyo kan Baarlamaanka.